अर्चना पनेरुले थालिन् फेरी यस्तो काम ! « Deshko News
अर्चना पनेरुले थालिन् फेरी यस्तो काम !
नेपाली पाेर्न स्टार बन्ने उद्घाेष गरेर हट दृश्य दिँदै अाएकी अर्चना पनेरुले रेष्टुरेन्ट ब्यवसाय थालेकी छन् । उनले काठमाडौको नयाँ बसपार्कमा ‘मुन वाकर बार एण्ड क्लब’ संचालनमा ल्याएकी हुन् । केही युवासँगको सहकार्यमा उनले सो रेष्टुरेन्ट ब्यवसाय थालेकी हुन् ।
केही दिन अगाडि संचालनमा ल्याएको उक्त रेष्टुरेन्ट उनी आफैले तताउने गरेकी छन् । रेष्टुरेन्टमा आउने दर्शकको फर्माइस् अनुसार उनले नृत्य देखाउँछिन् । फर्माइसको नृत्य पाउँदा बारमा आउने ग्राहकले हुस्की र बियरको चुस्कीसँर्गै उनी तिर पैसाका बिटा उठाउने गर्दछन् ।
सिक्पल पहिरन बाट नृत्य सुरु गर्ने अर्चानले रात छिपिदै गएपछि आफूलाई कामुक रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छिन् । केही म्युजिक भिडियो र दुई चलचित्र अभिनय गरेकी अभिनेत्री अर्चनाले यस अगाडि राम्रो पारिश्रमिक लिएर नयाँ बसपार्कमा मै रहेको उर्वसी डान्स बार तताउदै आएकी थिइन् ।
सो बार छोडेर उनले आफ्नै रेष्टुरेन्ट संचालनमा ल्याएकी हुन् । उनको बारमा उनकी आमा पनि देखिने गरेकी छन् । रेष्टुरेन्टमा उनी लगायत करिव आधा दर्जन युवतीले डान्स गर्ने गरेका छन् । नयाँ बसपार्कको अन्य रेष्टुरेन्टको तुलनामा उनको रेष्टुरेन्टमा दर्शकको भिड लाग्ने गरेको छ ।
पोर्नस्टार बन्छु भन्दै आफ्नो नाङ्गा र उत्तेजक तस्बिर सामाजिक संजालमा सार्वजनिक गरेपछि पहिलो पटक चर्चामा छाएकी अर्चना महेन्द्रनगरमा आयोजित प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेस प्रतियोगितामा सेकेन्ड रनर्सअप समेत भएकी थिइन् । नग्न तस्बिर सार्वजनिक भएपछि मिडियाका लागि हटकेक भएकी उनलाई प्रहरीले अश्लिलता फैलाएको आरोपमा कयौपटक उनलाई पक्राउ समेत गर्यो ।
अश्लिलता फैल्याएको आरोपका कारण गाउँ नै छोड्न बाध्य काठमाडौं छिरेकी उनी केही निर्देशकको तानातानमा समेत परिन् । थुप्रै चलचित्र अफर पाएकी उनले ‘जिस्म’ र ‘छेस्को’ अभिनय गरेकी छन् । चलचित्र अभिनयमा भरपुर हट दृश्य दिदा सफलता हात पर्न नसकपछि उनी रेष्टुरेन्ट तिर लागेकी हुन् ।